Kedu ka ndị ahịa B2B kwesịrị isi bulie usoro ha maka usoro azụmaahịa | Martech Zone
Ka anyị na-agba ajụjụ ọnụ maka ndị isi azụmaahịa, nyocha ihe ndị dị n'ịntanetị, wee hụ nsonaazụ nke mbọ anyị iji nyere ndị ahịa anyị aka, enweghị obi abụọ gbasara ike azụmaahịa ọdịnaya maka mbọ inweta B2B. Ulo oru na achoputa ihe ha choro ozo na ntanetị karia mgbe obula.
Otú ọ dị, nsogbu dị na ya bụ na ụlọ ọrụ dị iche iche na-emepụta ọdịnaya anaghị arụ ọrụ. Mgbe a jụrụ ndị ahịa B2B gara nke ọma ihe kpatara azụmaahịa ọdịnaya ha ji rụọ ọrụ, 85% meriri elu dị elu, ọdịnaya dị irè karị ihe e kere eke n’elu. Anyị na-aga n'ihu ịkwanye a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya gakwuru ndị ahịa anyị ebe anyị na-edekọ ohere na oghere dị na ọdịnaya ha, ma rụọ ọrụ iji mepụta isiokwu akọwapụtara, nke dị elu.
Usoro ahia ahia gbadoro anya na ịmepụta ma kesaa ọdịnaya bara uru, dị mkpa, ma na-agbanwe agbanwe iji dọta ma jigide ndị na-ege ntị akọwapụtara nke ọma - yana, n'ikpeazụ, ịchụpụ ahịa ndị ahịa bara uru.
47% nke ndị na-ere ahịa B2B kwuru na ha nwere nsogbu na itinye ego na usoro azụmaahịa ha. Anyị na-ahụ nke a yana ndị ahịa anyị ma rụọ ọrụ iji dozie usoro iji belata ibu arọ na ndị ahịa anyị.
Iji maa atụ, anyị nwere otu onye ahịa anyị na-ahazi kwa ụtụtụ kwa ọnwa iji dekọọ ọtụtụ pọdkastị. N'otu oge, anyị na-edekọkwa ha na vidiyo. Anyị ga-ejikwa pọdkastị ahụ, mepụta vidiyo ahụ, nyefee ha n'aka ndị edemede anyị, wepụta isiokwu maka mgbasa ozi nke ndị nwe ya ma nweta ya, wee chịkọta nsonaazụ ahụ na-akpaghị aka na akwụkwọ akụkọ kwa izu. Nrụpụta a na - ebute obere oge ejiri rụọ ọrụ na ọdịnaya ọdịnaya yana ọbụlagodi ntinye aka n'ihi itinye aka n'ofe ọwa.
Ndị ụlọ ọrụ ekwesịghị ịchọ ego ma ọ bụ ihe enyemaka maka ịzụ ahịa ọdịnaya mgbe ihe ka ọtụtụ n'ime ha nwere na-adịghị na-arụpụta na-arụpụta. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ, kama, belata olu nke ọdịnaya na-emepụtaghị nke ọma ma lekwasị anya na itinye aka, mkpa, yana ọdịnaya achọrọ, ha nwere ike ịchekwa oge ma bulie mmetụta nke mbọ ha.
Dabere na Marketinglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnaya, Pasent 39% na-eme atụmatụ ịbawanye ahia ha na-emefu n'ime ọnwa iri na abụọ sochirinụ
Site na mgbanwe mgbanwe na-agbanwe agbanwe nke ire ahịa ọdịnaya, ịgbaso usoro na ngwa ọhụụ kachasị dị mkpa, ọ bụ ya mere ọtụtụ ụlọ ọrụ ugbu a ji eche echiche iji mee ka atụmatụ ha dị ka o kwere mee n'afọ ndị na-abịanụ. Ndị ụlọ ọrụ ndị a dị njikere karịa itinye ego buru ibu na-akwado atụmatụ ahịa ha n'afọ a na-abịa. GroupM na-ebu amụma na ngụkọta ọrụ ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ ga-agafe $ 1 puku ijeri ọnụ ụzọ nke mbụ na 2017. Jomer Gregorio, Digital ahịa Philippines
Nke a bụ ozi nkọwa dị ịtụnanya, B2B Ọdịdị Mgbasa Ọdịnaya na 2017.
Tags: 2017b2bb2b ọdịnaya ahia ahiaahịa b2bb2b usoro ahiacontent Marketingusoro ahịa ọdịnayadijitalụ ahịa dijitalụọnọdụ